Spotify for Blackberry: raaxaysta Spotify ee BlackBerry offline
> Resource > Beddelaan > Spotify for Blackberry: raaxaysta Spotify ee BlackBerry nooc kasta
Haa, Spofity for Blackberry waxaa laga heli karaa haatan. Spotify, mid ka mid ah adeegga music ugu caansan adduunka, ayaa si rasmi ah ku yimid ee dukaamanka BlackBerry App Adduunka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah la dhaafi karin. App waa kaliya la jaan 9780 Geesi, 9700 Geesi, 9300 qalooca, 9000 Geesi ama 8520 qalooca, iyo taageerada kaliya ee telefoonada socda shabakadaha GSM. Waa hagaag, waxa aad samayn lahayd haddii aad telefoonka waa CDMA-shabakad ka mid ah ama Shuclada 9800 iwm? Waayo, kuwa qalabka Blackberry oo aan hadda la socon app Spotify, waxaa jira workaround ah.
Spotify TunesGo-ka dhigi doonaa sida il music shakhsiga ah iyo iibsiga qalabka Android xor ah
Wondershare TunesGo - Download, Bedelka iyo maarayn music aad macruufka / Android Devices
Wondershare Streaming Auido taariikhqorihii ( AllMyMusic for Mac ) waa mid kale xoog leh lagula taliyey. Waxaa xal hal-click siisaa dadka isticmaala si ay u soo bixi il music Spotify oo waxaan iyaga ku badbaadin galay MP3 files, si ay si fudud u dajiyaan kartaa music soo bixi Spotify in telefoon kasta oo BlackBerry sida Blackberry Shuclada iwm Sidaas, dadka isticmaala ku raaxaysan karaan Spotify ee BlackBerry leheyn qalabka sidaas oo kale.
Download music Spotify effortlessly tayo waayi maayo
Save the music Spotify in MP3 si toos ah u gudbiyo
Aqoonsadaan song info u track kasta, oo ay ku jiraan song horyaalka, farshaxanka album, iwm
Sida loo isticmaalo Download Music Spotify for Blackberry
Tallaabada 1 Download iyo rakibi barnaamijkan
Download barnaamijkan ka link kor ku xusan iyo dooran version saxda ah ee computer. Ka dib markii la rakibey, waxaa la furo si ay u helaan diyaar.
Tallaabada 2 Start soo bixi Spotify for Blackberry
Ka dib kuu soo ordi this smart Spotify u app Blackberry, waxaad u baahan tahay in ay soo booqdaan Spotify.com ka dibna aad u ogaato doonayay music Spotify aallada BlackBerry aad. Marka aad hubisaa in mid ka mid sax ah, riix "Record" badhanka cas oo ku geeska kore ee bidix ee interface ugu weyn this app ee. Ka dib markii in, waxaad u baahan tahay in ay dib ugu soo laabtaan website-ka si ay u ciyaaro mid ka mid ah heesaha Spotify jeceshahay. Kolkiiba, waxaad ka arki kartaa app tani waxaa la qoro song Spotify, iyadoo garaaf spectrum audio muuqday. Marka duubo la dhammeeyo, file MP3 ah lagu dari doonaa maktabadda this app ee. Ogsoonow in inta lagu jiro duubo, music Spotify waa in si habsami leh u ciyaaray iyadoo aan la kala gooyey, ama ma waxaad ka heli kartaa dhamaystiran file a music Spotify.
Tallaabada 3 Play Spotify on offline Blackberry
Hadda, waxa aad bilaabi kartaa in ay ku wareejin ah music soo bixi Spotify in BlackBerry for loo maqli karo waqti kasta iyo meel kasta. Thanks for MP3 ee waafaqsan ballaaran iyo isticmaalka habboon; aad dajiyaan karaa MP3 files si aad BlackBerry nooc kasta Raaxo iyadoo wax dhibaato ah. Just xaq guji Spotify wadada audio in ay maktabadda ka dibna dooro "furo folder track ee ay ku jiraan" ikhtiyaar in ay halkaas ku helaan. Intaa ka dib, waxaad MP3 file Spotify in ay BlackBerry wareejin karaa calbe. Taasi oo dhan.